Siyazi ukuba omnye izizathu kutheni nisolko apha kwaye ufunda eli nqaku ngu kuba ufuna ukuya kuhlangana Isitshayina icacile kodwa nje andazi eyona ndawo ukujonga. China ukuqinisekisa ukuba ufumana i-enkulu kweli lizwe kwaye ujonge kuba icacile ngaphandle ufunda eli nqaku ingaba kukunika a pretty nzima ixesha lessens yakho chances ka-ingxowa-ithelekiswa Isitshayina icacile ngoko nangoko. Ngoko ke, hlala nje kwi-kwesitulo sakho kwaye wonwabe kwi discovering apho ungakwazi kuhlangana icacile kwi-China. Nge staggering bonke ka-million yabantu, i-shanghai lwenziwa njengoko enye uninzi populated izixeko kwi-China. Ngenxa umbindi lizwe ke, amashishini kunye urhwebo, abaninzi icacile nzulu kwaye umsebenzi apha ku-jonga kuba ngcono ubomi amathuba. Kwi-i-shanghai, kukho ngqo indawo ngokuba i-shanghai Isikwere Kwimakethi nto a kwimakethi kwi Abantu ke Park apho abazali babantwana omnye abadala get ukuba babelane ulwazi malunga abantwana babo ukuze ukufumana ezilungele iqabane lakho kuba nabo. Oku kwenzeka wonke mgqibelo nangecawa ukusuka NN ukuba PM. Kodwa foreigners nokufumana abancinane comment kunye ukufumana ukufanisa apha ukususela uninzi Isitshayina abazali ingaba ukhetha zabo unyana nentombi enye a Isitshayina wesizwe. Zisekhona iselwa ezimbalwa iindawo kwi-i-shanghai apho unako kuhlangana icacile. Kodwa kule enkulu yesixeko, uza ikakhulu kuhlangana girls abakhoyo kwi-casual dating kunokuba elide budlelwane. Nge-i-shanghai ekubeni i-urbanized isixeko, abafazi kukho idla westernized, career-oriented, ubuya kanjalo kuba zininzi kakhulu competitions ezivela kwezinye foreigners. Kodwa nangona kunjalo, ke elikhulu kwindawo ukuya kuhlangana i-shanghai icacile. Ekubeni China ke ikomkhulu kwaye omnye kweli lizwe ke wemiceli-izixeko, Beirut kukuba isixeko ngokupheleleyo amandla kwaye abantu. Isixeko ibekwe kufutshane Bohai Gulf, umntla mpuma-China. Nangona ke ayisosine njengoko populated njengoko i-shanghai, Beirut ingu a hugely populated isixeko kunye yezigidi abantu. Alikwazi ukwahlula nzima ukuya kuhlangana icacile in Beirut.
Njengathi i-shanghai, abantu abaninzi ingakumbi abasetyhini, kwenzeka Beirut ukujonga kuba amathuba emisebenzi kunokuba zabo ekhaya isixeko. Ngenxa isixeko ngu urbanized kwaye rhoqo watyelela yi-foreigners, Beirut abafazi ingaba ngakumbi vula ukuba dating kwabo ukusukela baya practically bona nabo yonke imihla.
Xa kuthelekiswa abanye abantu, baya
ngakumbi vula-minded, ezantsi emhlabeni, kwaye fun ukuba ube kunye. Isixeko Chengdu ifumaneka yexabiso elikhulu River Delta kwi-Umzantsimpuma China kunye a bonke ka-million yabantu, isixeko ngu quieter kwaye ngaphezulu relaxed kuthelekiswa megacities ngathi i-shanghai kwaye Beirut. Yabo relaxed inyathelo nje kanjalo ngenxa yokuba isixeko ifumaneka mountainous iindawo.
Chengdu yaziwa China kuba ekubeni i-ebukeka abafazi
Kunye Isitshayina abantu ke esezantsi ye ubuhle njenge flawless mhlophe imigca enqamlezeneyo kwaye nje ngokulula ilisebe ubuhle, Chengdu abafazi ngokuqinisekileyo aced kwezi amacandelo. Isitshayina abafazi ukusuka Chengdu ingaba eyaziwa ukuba ube nomdla iza kwaye determination xa kuthelekiswa kwabanye. Zinhle, kodwa ke, ukuqinisekisa ukuba ingaba uthando lwabo spicy ukutya apho basenokuba kancinci ngumngeni kuba ufuna ukuba ukhe ubene hayi fond ka-chilis. Nkqu nokuba Chengdu ngu ngaphantsi urbanized, zisekhona iindawo ukuba uyakwazi ndwendwela ebusuku apho unako kuhlangana icacile.
Xa approaching Chengdu girls, ke kubalulekile ukuba abe amagama amakhulu, polite, kwaye ube uqinisekile. Nayiphi na umfazi ingaba ufuna ukuba umhla umntu ngubani kakuhle-mannered kwaye sele kokuthenjwa ngokwabo. Ebekwe kwi-yexabiso elikhulu River Delta ka-Umzantsimpuma China kukuba isixeko Guangzhou. Lwesithathu likhulu isixeko kwi-China ngu-populated nge-i-avareji engama yezigidi abantu kwaye waziwa kuba ekubeni lezemveliso isiseko kwi-China. Kodwa kunjalo, kukho ezinye izinto ezinomdla malunga Guangzhou, kwaye oko kukuthi zabo ngobuninzi ka-amazing cuisines kwaye ideally nabafana abafazi. Kwi-Guangzhou, uyakwazi kuhlangana Isitshayina icacile practically kuyo yonke indawo, kodwa uza ikakhulu ukufumana kwabo kwi: Ofisi kweencopho kwaye Hotels – ungafumana elizimeleyo-ofisi ladies ukusuka la iindawo. Ikakhulu jikelele lunch ixesha ngaphandle-umsebenzi phinda-phinda. Iinkwenkwezi kwaye cafes – Ntle yaziwa njenge”Isixeko Busuku Ubomi”, baninzi famous iinkwenkwezi kwaye cafes ungaya kuhlangana omnye abafazi. Ungafumana iinkwenkwezi kwaye cafes ihamba Haunch Dong Road, Jian yena Liu Road, Tajin Road, Waterfront Yanjing Zhong Ezindleleni, kwaye nabanye abaninzi. Restaurants – Restaurants kwi-Guangzhou ukuba ukukhonza okulungileyo ukutya kuba mnandi ambiance unako ukutsala abantu abaninzi, kuquka icacile kwaye migrants ukusuka ezahluka-amaqela-China. Ngaba nento yokuba ibe surprised ukuze uphumelele khange kuphela ukufumana ukutya okulungileyo, kodwa kanjalo okulungileyo-ujonge abafazi. Famous restaurants njenge Dong Bei Ren, Zinging, Mao Jia Wan, Donating Tu Kaiyuan ingaba ezinye famous kwi-Guangzhou. Iyunivesithi – Xa sihamba iyunivesithi kwi-Guangzhou, uzakufumana ebukekayo, lively, kwaye witty girls. Kuba le ndawo yokugqibela, uphumelele ukuba kufuneka utyelele zonke indlela China nje ukuya kuhlangana icacile ukusuka i-shanghai, Beirut, Chengdu, kwaye Guangzhou. Nje ngokulula ujoyinela ingxelo qho Isitshayina dating site okanye i-app ngathi Ngokwenene Isitshayina, zalisa kuya phezulu kunye inkcazelo yakho, ngoko ke qalisa funa icacile ngomhla oxeliweyo iindawo ukuba ufuna. Oku kanjalo ngokupheleleyo convenient ukuba ukhe ubene sele China kwaye babefuna ngokukhawuleza ukufumana umntu othile ukuze beka phantsi ngomgca. I-app kanjalo equipped kunye umyalezo uguqulelo msebenzi ukuba ikuvumela ukuba usebenzise nayiphi na ulwimi ukuba ukhetha kwaye guqulela yona ulwimi ukuba omnye umntu ethambileyo kunye. Kodwa xa ufuna ukuba sele China kwaye malunga ukuhlangabezana umntu othile phaya, qiniseka ukuba zithetha isingesi ulwimi ukuthintela naziphi na iintlobo zongquzulwano kwaye miscommunications. China yi enkulu kweli lizwe kwaye uyakwazi practically kuhlangana Isitshayina icacile naphi na. Kodwa kuxhomekeke kwizicwangciso zakho dating izinto ezikhethekayo ze-kwaye yintoni qualities ufuna ukuze iqabane lakho liza ngokupheleleyo kuxhomekeka kwimeko apho kufuneka ujonge ukuba ahlangane kwaye umhla Isitshayina icacile
← Foreigner Shamelessly Ityhila Njani Lula kubalulekile ukuba Hook Phezulu ne-Girls kwi-China